.: ကျေးဇူးစကား တစ်ခွန်းတော့ခါပြောပါ
အပန်းဖြေစခန်းက ပြန်လာရေ ကားတစ်စီးသည် လမ်းတစ်နိန်ရာ ကျုပ်အိုင်မှာ ရပ်လားခသည်။ ကားထက်က သသားနနား ဝတ်ဆင်ထားရေ လူတစ်ဦးက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးကေ-
“ငါ့ကားအောက်ထဲဝင်ပြီး အသူ ဝက်အူကျပ်ပီးနိုင်ဖို့လဲ” လို့ အော်ဟစ်ပနာအကူအညီ တောင်း လိုက်သည်။
ကား၏ဆီတိုင်ကီက ဝက်အူတစ်ချောင်း ချောင်နိန်လို့ ဆီတိယိုနိန်ရေအတွက်ကြောင့် ရပ်တန့်လားခခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်နန့်လည်း စကေအလှမ်းဝီနိန်သောကြောင့် ကားပိုင်သျှင်၏စိတ်ကား အိုးဖုံးပူအထက်က ပုရွက်ဆိတ်ချေတိပိုင် လှုပ်ယှားနိန်သည်။ ကားပိုင်သျှင်ဘေးက လှလှပပပျင်ထားရေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက-
“ဆုငွေဟိကေ ကူရေလူ ပေါ်လာလိမ့်မည်” လို့ပြောလိုက်ပါသည်။
ယေခါကားပိုင်သျှင်သည် တန်ဖိုးကြီး ပေသာတစ်ရွက်ကို အလျှင် အမြန်ထုတ်ပြီးကေ-
ဝိုင်းကြည့်နိန်ရေ လူတိထဲက လူငယ်တစ်ဦး တစ်ချက်လှုပ်လားခသည်။ ယကေလေ့ ဘေးလူတစ်ယောက်က
“ပေသာဟိရေလူတိစကားကို မယုံကေ့” ဆိုပြီးကေလှမ်းဆွဲလိုက်သည်။
ယင်းအချိန်မှာ အချေတယောက်က ထွက်လာပြီးကေ-
“ငါ ကူမေ” လို့ပြောလိုက်သည်။
ယင်းအချေက ကားအောက်ထဲဝင်ပြီး ဝက်အူကို ကျပ်ပီးလိုက်သည်။ တစ်မိနစ်တောင် မကြာရေအချိန်မှာ ကားအောက်က ထွက်ပြီး ကားပိုင်သျှင်ကို မျှော်လင့်ချက်မျက်လုံးနန့် ကြည့်န့်ကြည့်နိန်ခသည်။ ကားပိုင်သျှင်က ယင်းအချေကို အဂုနက ငွေကိုလှမ်းပီးဖို့လို့အလုပ်မှာ အမျိုးသမီးက -
“ဒေပေသာကိုပီးဖို့လို့လား? အကြွီတစ်ချို့ ပီးလိုက်ပါ”
ကားပိုင်သျှင်က အမျိုးသမီးဘားက ပေသာအကြွီကိုယူပနာ အချေကိုလှမ်းပီးလိုက်ပါသည်။ အခကေမယူဘဲ ဂေါင်းခါပြသည်။ ဝိုင်းကြည့်န်ိန်ရေ လူအုပ်ကြားက ဝေဖန်သံတစ်ချို့ထွက်လာရေခါ ကားပိုင်သျှင်က အကြွီ တစ်ချို့ ထပ်ပေါင်းပြီးကေ အချေကိုလှမ်းပီးလိုက်ပြန်သည်။ အချေက ဂေါင်းခါပြန်ရေခါ ကားပိုင်သျှင်က စိတ်ဆိုးပနာ-
“ဇာလဲ? မင်းကနည်းသိမ့်ရေလို့ထင်လား? နည်းရေထင်ကေလုံးဝမပီးယာနှ” လို့ အော်လိုက်သည်။
“နည်းရေထင်လို့မဟုတ်ပါ။ ငါ့ဆရာပြောပါရေ။ လူတိကို ကူညီခြင်းကား အကျိုးအမြတ် ရဖို့အတွက် မဟုတ်ပါ” လို့ အချေက ပြန်ပြောရေခါ-
“ယင်းပိုင်ဆိုဂေ မင်းဇာဖြစ်လို့ မလားသိမ့်စော်လဲ?” လို့ ကားပိုင်ရှင်က စိတ်ပျက်လက်ပျက် မိန်းလိုက်ပြန်သည်။
“ဘေးဘေဘားက ကျေးဇူးတင်ပါရေ-ဆိုရေ စကားတစ်ခွန်းကို ငါစောင့်နိန်စော်ပါရာ” လို့ အချေကပြန်ပြောလိုက်ပါသည်။
လူအချင်းချင်းကြားက အပြန်အလှန်နားလည်မှုစွာ ကကောင်းကြောက်ဖို့ကောင်းကြောင့်ဒေပုံပြင်က ပြော လားခပါသည်။ တူညီရေ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ ကာယာကံသျှင်ဖက်က ကြည့်ကေတစ်မျိုး၊ တစ်ခြားလူဖက်က ကြည့်ရင်တစ်မျိုး စရေ အမြင်မတူစွာတိ ဟိတတ်ကြသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ကိုယ်တိုင်ရွီးထားစော်မဟုတ်ပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ဘားက Forward လုပ်စော်ကိုကြိုက်လို့ ရခိုင်ဘာသာသို့ပြန်ပြီကေ တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 4:50 AM